Nin lugu weeraray mindi magaaladda Malmö oo udhintay dhaawicii soo gaaray | Somaliska
Nin lugu weeraray mindi magaaladda Malmö oo udhintay dhaawicii soo gaaray
Magaaladda Malmö oo ah caasimadda seddexaad ee dalkaan Iswiidhan, aya xalay dhaawac loogu geeystay nin da’diisa lugu sheegay 45 jir. Ninkan ayaa markii dambe waxaa uu isbitaalka ugu dhintay dhaawici mindida ka soo gaaray.
Goob joogayaal u waramay teleefeyshinka dalka ee SVT, ayaa sheegay in nin kan la dhaawacay uu gacan qaad dhex maray nin kale oo aan la ogeeyn sababta ay isku maageen. Booliska iyo aambalaasta oo goobta gaaray saacadu koleey aheyd 23.00 fiidnimo, ayaa arkay ninkan oo dhaawac culus ka soo gaareen midiyihii lugu dhiftay. Sidoo kale ninkan ayaa dhaawaciisi ka hor intaan loola cararin isbitaalka waxaa uu ku cararay maqaayad ka dhaweyd meesha oo weydiistay dadkii ku sugnaa ineey u wacaan gar gaarka deg deg ah.
Ma jirto cid loo soo qabtay dilkaasi ama ku lug leh, hase ahaatee booliska waxaa falkaasi ku tilmaameen inuu ahaa dil bareer ah. Ma ahan markii ugu horeeysay oo qof lugu dilo magaaladda Malmö. Muddooyinkii ugu dambeeyey magaaladda waxaa ay la daala dhaceeysay falalka amni xumo ee ka jira iyo dagaalka xabadaha la isku adeegsado ee u dhaxeeyo kooxaha falal dambiyeedka geesta. Ugu dambeyntiina falalkan soo laa laabtay ayaa dadka reer Malmö walaac ku ku abuuray.